February 21, 2019 qawdhan
Kasoo qaad inaad tahay Abbiy Ahmed. Waxaad tahay 42 jir, waxaad Raysal Wasaare u tahay dalalka Afrika iyo dunidaba ugu faca weyn. Waxaad madax u tahay 105 milyan oo qof. Aabahaa wuxuu ahaa Oromo muslim ah hooyadanaa Amxaaro kiristan ah.
Waxaad tahay nin fahmo badan oo waxbarashadu way kuu fududayd wakhtigii iskuulka. Waxa kaloo kuu raaca inaad tahay nin bulshada fahma. Labadan arrimood waxay kuu sahleen in adigoo askari ah hadana aad diyaariso degree computer science ah. Waxaad u oomanayd aqoon shiidaal u noqota maskaxdaada waxaad degree-gii ku dartay Master cryptography ah adoo weliba jaamacad wadanka Koonfur Afrika ah ka diyaariyey.
Si aad uga midhadhaliso himiladaada waxaad laba Master oo kale oo Maamulka iyo Isbedelka ah iyo Maamulka iyo Maaraynta ah ka baratay Jaamacado ku yaala Ingiriiska iyo Maraykanka. Kugumay filnaan Degreegaaii iyo saddexdii Master ee waxaad raacisay PhD. Mawduuca Phd-da aad ku samaysay waxa u ku saabsanaa xalinta khilaafaadka iyo is-dhexgalka diimaha.
Markaa hadaad tahay Abiy Ahmed waxaad aqoon ahaan ka dhisan tahay dhanka maamulka dadka, ganacsiga iyo xalinta khilaafaadka. Waxaad kaloo ka dhisantahay dhanka engineerin-ka iyo aqoonta casriga ah ee computerada. Dhanka khibradana waxaad soo ahayd askari waxaad kaloo kusoo caan baxday ood ka mid ahayd dadkii diidana qaadashada dhulka Oromada ee ku xeeran caasimada Addis Ababa.
Shaqo kasta oo siyaasi ah ood soo qabato waxaad kasoo shaqaysay isku keenida dadka xisbiyada, diimaha, gobolada iyo qoomiyadaha u kala qaybasan.
Markii uu is casilay Raysal Wasaarihii kaa horeeyey waxa loo baahday hogaamiye dadka isku wadi kara oo weliba kasoo jeeda qoomiyada Oromada. Waxaad buuxisay shuruudihii lagugu aamini lahaa talada dalka.
Talada dalka markii aad qabatayba waxaad isticmaashay aqoontaadii nabadaynta iyo xalinta khilaafaadka adigoo la heshiiyey Eriteria. Waxaad kaloo sii deysay maxaabiistii siyaasada u xidhnaa. Waxaad cafisay kooxihii gobonimo doonka ahaa sida ONLF-ta Soomaalida.
Imika waxaad usoo jeedsatay sidii aad afkaaga ka sheegtay waraysigii aad siisay Jariirada Financial Times in aad rabto in aad dhaqaalaha fur-furto, kobciso kadibna 70 milyan oo Ethiopian ah aad faqriga ka saarto. Hadaba su’aasho waxay tahay Abiyow sided uga saareysaa?
Waxaad cadeysay in Ethiopia deyn badan ku jirto, waxaad kaloo sheegtay in dadkan qoomiyadaha isku haysta haday helaan nolol hagaagsan ay qaboobi doonaan. Waxaad tilmaantay inaad la shaqaynayso dawladaha Carabta ood rabto inaad iibiso shirkada Isgaadhsiinta ee Ethiopia.
Waxaad indhaha ku jeedisay wadamada aad jaarka tihiin ee Somalia, Somaliland, Eriteria, Djibouti. Waxaad rabtaa inaad 70 milyan oo Ethiopian ah ka saartid faqriga kadib waxaad ku tidhi aynu midow dhaqaale samaysano. Way kaa yeeleen. Waxaad kaloo gaar ahaan Somalia weydiisatay in ku siiyaan 4 dekedood, nasiib wanaagaaga way kaa yeeleen. Waxa imika kula jooga Madaxweynaha Somaliland isagana waxaad kala hadashay isticmaalka Dekedda Berbera ood rabto in alaabta Ethiopia bilaash kaga soo degto. Balse Somaliland dekedeedii Berbera waxa haysata shirkad ajnabi ah, khidmada alaabta Dekede Berbera kasoo degta dawlada Somaliland ma qaadato, gawaadhida imika alaabta Ethiopia u qaadaana 100% waa Ethiopian, berigii hore 50% gawaadhidu reer Somaliland bay ahaayeen. Markaa hadii ay Somaliland kaa ogolaato inay alaabta Ethiopia bilaa cashuur kusoo dhaafto Dekeda Berbera, weliba gawaadhida qaadaysaana ay Ethiopia keensato wax macaash ah oo Somaliland ugu jiraya ma jirto Abiyow.
Bal arrintaasina in lagaa yeelo waanu eegaynaa.
Dhanka kale Abiyow shirkada Isgaadhsiinta ee Ethiopia waa shirkada ay lacagta adagi uga soo xerooto dalkaaga. Hadaad adoo Ethiopia ah is tidhaahdo ku dayo Koonfurta Korea way adkaanaysaa waayo isku dad iyo isku meel kuma taalliin.
Abiyow horta miskiin fudud baad u egtahay laakiin maskax weyn iyo aqoon badan ayaad leedahay.
Waxa aan la dhacay sidaad u fahansantahay quruxdu inay tahay qayb ka mid ah hogaaminta, waayo sidaad sheegtay markii ugu horeysay eed Raysal Wasaare noqoto waxaad amartay in xafiiska Raysal Wasaaraha aad qurxiso oo midabka cadaanka ku qurxiso. Waxaad kaloo amartay in Madaxtooyada aad casriyeysid.
Koley anigu ku fahmay Abiyow waxaad rabtaa inaad Ethiopia ka dhigtid dalka ugu awooda badan uguna dhaqaalaha badan geeska. Waxaad rabtaa in dadku is dhexgalo. Waxaad ogtahay in nabada iyo isdhexgalka ay Ethiopia ku heli karto dekedo ay wax kala soo degto oo bilaash ah. Waxaad kaloo ogtahay in dimuqraadiyada iyo doorashooyinku caawiyaan kolba dadka badan adna dee Oromo 60 milyan ah ayaad kasoo jeeda.
Madaxda Soomaalida eed is aragtaan iyo kuwa ku hoos yimaadaba isku meel kama fikirtaan. Iyagu waxay ka fikirayaan goboladooda iyo xukunkooda adna waxaad ka fikiraysaa sidaad hantidooda uga faa’iideyn lahayd dalka Ethiopia.
Previous Post Indho Hadal
Next Post Maado Keliya Ha Baran!